Global Voices teny Malagasy » Liberiàna Mpanao Gazety, Nosamborina , Voakapoky ny Fitakiana 1,8 Tapitrisa Dolara Amerikana Tao Anatin’ny Disadisa Pôlitika · Global Voices teny Malagasy » Print
Voadika ny 30 Avrily 2018 17:00 GMT 1	 · Mpanoratra Nwachukwu Egbunike Nandika Vero
Sokajy: Afrika Mainty, Liberia, Fahalalahàna miteny, Fanampenam-bava, Media sy Fanoratan-gazety, Mediam-bahoaka, Politika, GV Mpisolovava
Monrovia amin'ny alina. Sary avy amin'i Blk24ga tao amin'ny Wikimedia Commons (CC BY 3.0)
dad Miatrika fitoriana amin'ny fanalambaraka arahana onitra 1.8 tapitrisa dolara ny gazety  Liberiana mpivoaka isanandro FrontPage Africa  (FPA), fitoriana teraka avy amin'ny disadisan'ny fianakaviana iray mifanditra momba ny lova navelan'ny mpanao politika iray nodimandry.
Voampanga ny FPA ho nanamafy sy namoaka fampahafantarana  tsy marina izay nipoitra tao amin'ireo dika nataony printy tany amin'ny tapaky ny Martsa 2018. Napetrak'ireo avy amin'ny fianakavian'ilay mpampanoà lalàna Liberiana taloha Lawrence K.Morgan izay efa nodimandry ilay fampahafantarana ary nampitandremana an'ireo mpamaky hoe tsy manana alalana ny “hampanofa, hamarotra, haka hofantrano, na hanao fandraharahàna hafa” amin'ny lova navelan'i Morgan ireo mpitantana ny fananan'i Morgan, Henry A.K. Morgan sy Moses T.Konah.
Ho valin'izay, nitory an'ilay gazety i Morgan sy Konah. Tamin'ny 5 Aprily, namoaka baiko fanakatonana ny biraon'ny FPA ny fitsarana. Tamin'ny 9 Aprily, fito tamin'ireo mpiasan'ilay gazety no nosamborina ary nakatona ny biraony. Navela nivoaka tamin'iny andro iny ihany ireo mpiasa nosamborina ary niverina nisokatra ny biraony rehefa avy nandoa 5.000 dolara amerikana ny gazety.
Niteny ireo mpiasa mpitarika ao amin'ny gazety fa olona hafa avy ao amin'ilay fianakaviana Morgan ihany no nametraka ilay filazàna, tao anatin'ny toa disadisa anatin'ny fianakaviana momba ny lova. Nalàn'ny FPA ilay filazàna vantany vao nifanatrehana tamin'i Morgan sy Konah, saingy mbola nametraka fitoriana  ihany izy roa.
Na dia nivoaka tany amin'ny gazety hafa maro aza ilay filazàna, ny FPA ihany no nilanja ny vokany.
Misy izao ny honohono fa nampiasa an'ilay filazana ho antony mba hanafihana an'ilay gazety i Konah, izay mpikambana tò teny ao amin'ny antoko Kongresy Ho an'ny Fiovàna Demokratika (CDC), ho valifaty noho ilay tatitrany manakiana ny governemanta.
Pikantsarin'ny Talen'ny Famoahana ao amin'ny FPA, Rodney Sieh (havia) miresaka amin'ny solontenan'ny Komity Mpiaro ny Mpanao Gazety (CPJ) tao amin'ny biraon'izy ireo ao New York momba ireo lalàna miady amin'ny fanalambaràka ao Liberia.
Niresaka tamin'ny Global Voices (GV) i Kamara A.Kamara, filoha fahiny tao amin'ny Sendikan'ny Gazety tao Liberia, mba hanazavana ilay tantara miafina ao amin'ilay filazàna ary ny fitoriana amin'ny rezaka fanalàna baràka naterany ho an'ny FPA:
Ampahany amin”ny fianakaviana no nandefa fampahafantarana tany amin'ny gazety maromaro izay miteny fa tsy manana fahefana hisolo tena azy ireo hanao fandraharahàna ara-barotra amin'ny lova ireo olona sasany ao amin'ny fianakanaviana. Taty aoriana, nandeha nifampiresaka tamin'ny FrontPage Africa ireo olona izay voasoratra hoe tsy nahazo fahefana avy amin'ny fianakaviana [Henry A.K Morgan sy Moses T.Konah] mba hanalàna ilay fampahafantarana nataon'ilay gazety.
Olana manokan'ilay fianakaviana izy ity tany am-piandohana saingy taty aoriana dia lasa politika. Mpandray anjara tamin'ny fifidianana lasa teo sy mpikambana tò teny ao amin'ny CDC [Kongresy Ho an'ny Fiovana Demokratika], ilay antoko eo amin'ny fahefana, ny iray amin'ireo [Moses T. Konah] tafiditra ao amin'ity disadisam-pianakaviana ity. Nanana olana vitsivitsy tamin'ny governemanta ny gazety. Avy eo nptsaingohan'ny fanjakana ity disadisam-pianakaviana ity mba hiadiana amin'ny FrontPage Africa.
Na nisy aza ireo fifamatorana akaiky nisy tamin'i Konah sy ny CDC eo amin'ny fitondràna, nolavin'ny Ministeran'ny Fampahalalambaovao Liberiana ny maha-voarohirohy azy ao anatin'ilay disadisa momba ny fahalalahan'ny asa fanaovana gazety. Tamin'ny 9 Aprily, namoaka filazana imasom-bahoaka  nanamafy an'izany ny Ministera:
Tsy baiko avy taty amin'ny governemantan'i Liberia ny fanakatonana ny gazety FrontPage Africa sy ny fisamborana ny sasany tamin'ireo mpiasany.
Disadisam-pianakaviana mamboraka ny antony politika nanakatonana gazety
Tamin'ny Janoary 2018, nanditra ny kabarim-pitkanana fanaony , nampanantena ny Filoha Liberiana George Weah  fa hanorina avy eo ambonin'ny lovan'ny “fampandrosoana demokratika” avy amin'ilay nodimbiasany, Ellen Johnson-Sirleaf, “amin'ny fiarovana ny zon'ny Liberiana sy fanomezana azy ireo fahalalahana bebe kokoa” .
Kanefa, noendrikendrehan'i Weah ny tompon'ny FPA sy ny talen'ny fanontana, Rodney D. Sieh, ho nanao “femelezana ny mpitondra tamin'ny fomba tsy matianina”
Tamin'ny tafa ho anny gazety  tsy ela akory izay, tonga dia nampitandrina an'i Sieh i Jefferson Koijee, mpikamban'ny CDC sady Ben'ny tanànan'i Monrovia:
[Aza] mampiasa ny media mba handefasana ny fandaharam-potoananao tia tena ary ratsy saina, satria mila mivoatra i Liberia ary izao no fotoana tsara indrindra.
Herinandro vitsy talohan'ny namenoana an'ny taratasy fitoriana, niteraka fahasorenana tao amin'ny governemanta ny FPA rehefa nanao tatitra momba ny fanapahankevitrin'ny Filoha Weah handroaka ny lohan'ny Tetikasa Fangaraharahan'ny Indostrian'ny Fitrandrahana ao Liberia  (LEITI), birao tsy miankina napetraka mba hiantohana  ny fangaraharahana eo amin'ny sehatry ny ala, solika, fitrandrahana harena ankibon'ny tany, ary fambolena ao Liberia. Manana ny fahefana araka ny lalàna io mba hamoaka ireo fifanarahana atao amin'ny orinasa sy ny vola aloan'izy ireny amin'ny governemanta”
Nandroaka irery an'i Konah Karmo, Filohan'ny Sekretaria an'ny LEITI ny Filoha Weah, ary avy eo naka fepetra ambonin'ny lalàna mba hampidirana mpiaradia pôlitika, mpikambana ao amin'ny CDC, Gabriel Nyenkan. Nanazava ny The Daily Observer  :
Taorian'ny filazan'ny Filoha Weah, nanafika ny biraon'ny Sekretaria LEITI Atoa Nyekan niaraka tamin'ny polisy mitam-piadina nentiny ary nangataka mba handao ny tranobe fiasany ilay mpitarika azy, Konah Karmo. Voalaza fa nanaiky ny baikon'i Nyekan nomena narahana tamin'ny basy virtoaly
Ny tatitra avy amin'ny FPA no nanamarina  fa “mifanohitra be amin'ny Lalàna izay namorona ny birao [LEITI]” ilay fihetsika.
Nampangina ny gazety ilay fitoriana ho nanao fanalàm-baràka
Milaza  ny Global Witness  fa:
Tsy tokony hoentina hampanginana gazety ny fitoriana ho nanao fanalàna baràka, ary amin'ity tranga ity, volana maro talohan'ny daty hiakarany fitsarana no efa voasazy ny FrontPage Africa. Tsy maintsy teo no ho eo ny didy fakàna ny fananana, isan'izany ny biraony – tahàka ny trosa noterena tsy maintsy ho alohan'ilay gazety… Mitaky feo tsy miankina sy tsy mitanila ny demokrasia Liberiana, tahaky izay atolotry ny FrontPage Africa sy LEITI. Tokony manome antoka ny Filoha Weah fa hijanona ho malalaka ny mpanao gazetin'i Liberia – anisany ny Front Page Africa, ary mamerina amin'ny toerany ny lohan'ny Sekretariàn'ny LEITI, Konah Karmo.
Naneho ahiahy  momba ilay fanenjehana ny FPA itakiana 1.8 tapitrisa $ ny Komity Miaro ny Mpanao Gazety (CPJ) hoe ” efa ela no lasibatry ny fitarainana sy ny filam-baniny noho ireo tatitra ataony manakiana ireo fitondra nifandimby”
Nilaza ny Filoha fahiny tao amin'ny Sendikan'ny Mpanao Gazety, Kamara, fa mitovy aminà fanafihana atao amin'ny FPA noho ny fipetrahany amin'ny toerana manakiana ilay fihetsika:
Maninona no tsy nampidirin'i Henry A.K. Morgan sy Moses T. Konah ho ao anatin'ilay fitoriana ho nanao fanalambaraka koa ireo gazety hafa izay namoaka an'ilay fampahafantarana ? Izay no mahatonga azy hitovy endrika amin'ny fanafihana atao amin'ny FrontPage Africa noho ny fakàny toerana manakiana ny governemanta. Fanompàna ny fahalalahan'ny fitenenena ny fampisamborana olona amin'ny resaka raharaham-pitsaràna sivily. Ny fisamborana olona miainga amin'itony lalàna itony dia fanamelohana ny fahalalahana miteny , izay zava-dehibe ho an'ny fahalalahan'ny mpanao gazety.
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2018/04/30/117991/
 Miatrika fitoriana amin'ny fanalambaraka arahana onitra 1.8 tapitrisa dolara ny gazety: https://www.themonroviatimes.com/single-post/2018/04/09/Frontpage-Africa-Shutdown-Details-Emerge
 filazana imasom-bahoaka: https://www.faapa.info/en/2018/04/09/micat-clarifies-closure-of-frontpage-africa-not-on-govts-orders/
 kabarim-pitkanana fanaony: http://www.malawianwatchdog.com/featured/liberia-president-george-weahs-inauguration-speech-full-transcript/
 Filoha Liberiana George Weah: https://en.wikipedia.org/wiki/George_Weah
 tafa ho anny gazety: http://gnnliberia.com/2018/04/05/cdc-govt-launches-attacks-on-the-media-koijee-becomes-the-latest-attacking-fpa-editor/
 Tetikasa Fangaraharahan'ny Indostrian'ny Fitrandrahana ao Liberia: http://www.leiti.org.lr/about-leiti.html
 napetraka mba hiantohana : https://www.globalwitness.org/en/press-releases/global-witness-condemns-illegal-interference-liberian-transparency-and-anti-corruption-agency/
 Naneho ahiahy: https://cpj.org/2018/04/liberia-should-reform-libel-laws-in-wake-of-18-mil.php